Samee WordPress Plugins Qiimaha Lacagta? - Baro Blogging Khabiir
Samee WordPress Plugins Qiimaha Lacagta?
Waqtiga akhriska:4 Daqiiqado akhri
WordPress waa barxad si ballaaran loo isticmaalo oo ku saabsan internetka ku dhowaad 41% oo ka mid ah dadka isticmaala waxay ku dhistaan ​​boggooda WordPress. Waa lacag la'aan, il furan, oo leh dabacsanaan weyn. Waad ku dheereyn kartaa waxaad dooneysaa inaad lahesho ikhtiyaarro badan oo qaabeyn ah adoo adeegsanaya fiilooyin.
Xayeysiinta WordPress waa bilaash sifooyin kooban. Waxay kuugu kacayaan lacag si aad uga faa'iideysato astaamaha buuxa. Lacag bixinta waxay noqon kartaa hal-mar ama soo noqnoqda iyadoo lagu saleynayo adeegga aad gaadhay.
Plugins waa qaybta WordPress Platform. WordPress laftiisa waa barnaamij bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad samee bogag internet ah iyo baloogyada aad rabto. Si fudud ayaad wax uga beddeli kartaa, kudar khadadka koodhadhka, dib u xirxirid, iibiso oo u qaybi maxaa yeelay waa barnaamij bilaash ah oo bilaash ah oo ka hooseeya shatiga guud. Waxay ka dhigan tahay inaysan jirin wax xaddidan oo lagu sameeyo adeegga noocaas ah. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha waxay siiyaan horumariyaha kudarsiga koodh iyo hagaajinta qaabeynta sida loo dalbado.
Qalabka WordPress wuxuu ku kacaa lacag
Bilaash iyo Freemium WordPress plugins
Intaas waxaa dheer, Waxyaabaha loo yaqaan 'WordPress plugins' sidoo kale waa qayb ka mid ah khadadka koodhka, in u dhaqmo sida kordhinta muuqaalada. Had iyo jeer waxaan u soo jeediyaa macmiilkeyga inuu bixiyo astaamaha qiimaha aasaasiga ah ee fiilooyinka si kor loogu qaado shaqeynta. Inaadan ahayn horumariye koodh sameynta PHP, Had iyo jeer waxaan qaataa caawinta plugins.
Mar kasta oo aan u dhiso macmiilkeyga degel, Had iyo jeer waxaan tixgeliyaa dhisida degel si buuxda loo habeeyay iyadoo la kaashanayo fiilooyin bilaash ah. Marnaba iskuma dayi inaan kordhiyo kharashkooda. Mararka qaar, kiisku wuxuu dhacaa markii qaar ka mid ah macaamiishaydu ay u baahan yihiin degello internet oo xirfad sare leh. Rabitaankani wuxuu igu adkeynayaa inaan u aado astaamaha qiimaha leh.
Sidoo kale, dhawr bilood ka dib ayaan iibsaday “Elementor pro plugin“. Qalabkaani hadda waa maalin uu helay caan weyn. Faa'iidada qalabkan ayaa ah in si toos ah loogu daro khadadka koodhka gadaasha dambe. Iyada oo leh qalabkan, ku dar jiido iyo hoos u dhig muuqaal ii oggolow inaan horumariyo maalmo yar gudahood. Tani “Elementor pro” plugin igu kici 1000 oo lagu daray Doolar sanadkiiba soo noqnoqda.
Femiloriyada Freemium waa sida dhadhanka jalaatada oo kale. Ma heli kartid qaadada loo baahan yahay. Laakiin waxaad si fudud u ogaan kartaa sida sheyga gaarka ah ee WordPress uu u shaqeeyo, sida ay kuu caawinayso haddii aad sii wadato adeeggooda?
Hadaad tahay shaqsi bilow ah, Aniga shaqsiyan ma ihi inaad u aado shey qaali ah heerka bilowga ah. Waa inaad horumarisid degel leh astaamo aasaasi ah halkii aad ka dhisi lahayd heer xirfadeed. Markaad ku korto ganacsigaaga iibsashada shey caymis wuxuu noqon doonaa sida xabbad keega ah.
Marka taa laga reebo waxaan shaqsiyan kugula talinayaa inaadan si toos ah anshax xumo ugu soo dejineyin khadadka lacagta lagu bixiyo. Sidii aan hore kuugu sheegay, waxaa lagu horumariyaa shatiga guud ee dadweynaha. Waxay ka dhigan tahay qof walba ayaa ku dari kara khadadka koodhka, dib u xirxiro oo ku soo dhig calaamadda internetka bilaash.
Dhibaatada ka soo degsashada sharci-darrada ah waxay tahay inay leeyihiin gabal koodh ah oo si fudud loola socon karo isla markaana si fudud ugu dhici kara boggaaga marxalad dambe. Jabsiga macnaheedu waa in la ogaado gabal-kooda is-qoray. Waxay yaqaanaan hab lagu jabiyo koodhkaas oo marin loogu helo websaydhka. Tani runti waxay kugu noqoneysaa niyad jab. Waxaan shaqsiyan kugula talineynaa inaad kala soo baxdo plugins sarkaalka Keydinta WordPress.
Guud ahaan, Qaar ka mid ah plugins-yada WordPress ayaa kugu kacaya lacag, waxaa jira kumanaan kun oo fiilooyin ah oo ku jira keydka WordPress. Waxaad si fudud ku heli kartaa mid kale ama mid kale. Haddii qof kugu kaco, macnaheedu maaha in soo-saare kale oo sameeye ah uu sidaas samaynayo. Iskusoo wada duuboo, plugins waxay kuugu kacaysaa lacag bil kasta, sanadkii hal mar, ama ku soo noqnoqoshada, waxay gabi ahaanba kuxirantahay baahidaada sida aad ula socoto.
Ma ka iibsan karaa domain ka Godaddy iyo martigeliyaha WIX?
Juunyo 13, 2021
Juunyo 19, 2021